प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो? यति लिने भए लेउ नत्र भने यो पनि गुम्छ भनेर कसले भन्यो? अंतरिम संविधान मा रहेको एउटा अर्ध विराम पनि गुम्दैन। अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। प्रगतिशील शक्ति हरु जानु पर्यो भने तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तैयार हुनुपर्छ। देश लाई २-४ अरब बचाउन देशलाई २-४ सय खरब को घाटा लगाउनु हुँदैन।
Citizenship draft constitution federalism Madhesh madhesi musahar Prachanda Terai